DAAWASHO XASAASI AH: RW Kheyre oo si adag uga jawaabay baaqii Kismaayo & DF oo wali ku socoto jiho aan wanaagsaneyn | Www.tusmo.net
DAAWASHO XASAASI AH: RW Kheyre oo si adag uga jawaabay baaqii Kismaayo & DF oo wali ku socoto jiho aan wanaagsaneyn
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka koowaad ee dawladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho, ayna iskugu yimaadeen taageerayaasha Xukuumadiisa oo laga kala keenay degmooyinka gobalka Banaadir, ayaa sheegay in ay Soomaaliya horay u socoto.
Raysalwasaaraha oo u muuqday in uu ka jawaabayo warsaxaafadeedkii laga soo saaray Kismaayo ayaa sheegay in ay taabagal ka dhigayaan in Soomaalidu ay heshiiso, wada hadal iyo dibu heshiisiin-na lagu bedelo.
Mr, Kheyre ayaa sheegay in horey loo socday mudooyinkii u dambeeyey, wuxuuna cadeeyey in aysan cidna ka ogolaan doonin in dib loo celiyo Soomaaliya, taas oo uusan sheegin cidda ay tahay dadka celinaya.
Wasiirka koowaad wuxuu sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in la wadaago kheyraadka iyo siyaasadda dalka, ayna tahay arrin waajib ah in uu qof kasta garowsado, wuxuuna sheegay in ay diyaar u yihiin in ay eegaan marxalad kasta.
Wuxuu sheegay in aysan aqbaleynin in la dumiyo waxa ugu yeeray Iftiinka u soo baxay Soomaaliya, taas oo ula jeeday howlaha Xukuumaddiisu ay wado in ay yihiin kuwa sax ah oo wadiiqo wanaagsan ku socda.